Martinika : Ireo Andriana Farany Tao Amin’ireo Nosy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2018 16:35 GMT
Raha mbola eo amperiny mihitsy ilay hetsika sosialy efa naharitra herinandro roa mahery tao Goadelopa, ireo Departemanta Frantsay any Amerika (DFA), Goiana sy Martinika, kosa misaintsaina ny momba izay fandraisan'izy ireo anjara amin'ity hetsika faobe sy lalina ity. Ao anatin'io katrodoha io, ilay fantsom-pahitalavitra frantsay Canal+, toy ny efa nahazatra azy hatrizay, dia mitsabaka lovia mahamay sy manaitra indray ny adihevitra momba ny toerana misy ireo DFA, miaraka aminà lahatsary fanadihadiana iray mahabe resaka momba ny fifandraisana misy eo amin'ireo vondrom-poko sasany sy ny fanjakazakana ara-toekarena ao Martinika. Mazava loatra fa tsy misy afa-tsy izany no resahan'ny tontolon'ny bilaogy ao Martinika…
Ilay vehivavy martinikezy bilaogera, blogdemoi, manazava ny fahalinany amin'io lahatsary fanadihadiana io, taorian'ny nanolorany ilay tatitra:
Izao no tatitra, afaka jerena ao amin'ny tranonkalan'ny Canal+, momba ”Ireo Andriana Farany Tao Martinika” (mpamokatra: TAC Presse):
Ao Martinika, latsaky ny 1% ireo mponina mitàna ny 52% amin'ny tany famokarana. Ry zareo békés, mpandova ireo fianakaviana fotsy hoditra fahiny, nipetraka tao amin'ny nosy talohan'ny revolisiona frantsay.
Ho an'ny “Fanadihadiana Manokana”, vondrom-piarahamonina iray tsy dia misy mpahalàla ary tsy dia tia misehoseho loatra, nefa nitety taonjato maro nahatahiry ny fombany sy ny hareny ary ny fomba fifandraisany no nanaovan'i Romain Bolzinger fanadihadiana sy nananganany ny kisarisarinà depatemanta iray nokikisan'ny tsy fitoviana sy ny lolompo talohan'ny vanim-potoana fanjanahantany.
Tian'i blogdemoi ny hisarika ny saina hoe tsy tongatonga foana ny nandefasana ilay lahatsary fanadihadiana, indrindra fa miaina anaty tabataba sy korontana nateraky ny fanetsehana faobe ny ao Goadelopa, nosy eo akaiky eo, hetsika nateraky ny fisaintsainana manodidina ny ampihimamba ara-toekarena ataon'ny fianakaviana vitsivitsy. Fanampin'izay, ny 5 Febroary 2008, manao fitokonana faobe ny ao Martinika:
Tsara kendry mihitsy ilay fotoana, indrindra fa hoe niantso fitokonana faobe ireo sendikà ao Martinika ‘hanoherana ny halafom-piainana’ (araka ny fomba nilazàna azy) manomboka ny 5 Febroary.
Asehony ihany koa ny ahiahiny momba izay ho vokatry ny fandefasana io lahatsary fanadihadiana io, indrindra ao anaty vanim-potoana ifanjevoan'ny olana ara-toekarena sy ny fanomezana lanja ny fiaviana ara-poko :
Mety ho ratsy ny fandehan'io.
[…] Tsy maintsy iomanantsika koa ny fikisahan'io ho amin'ny resaka fanavakavahana volonkoditra sy fankahalàna vahiny izay mazava ho azy fa ho lavina ny filazàna azy amin'izany fomba fiantso izany, samy mahafantatra isika rehetra fa mandeha zotra tokana ny fanavakavahana volonkoditra sy fankahalàna vahiny, sa tsy izany ? Ny antenaiko fotsiny, ary ivavahako mihitsy, dia tsy ho pitik'afo handrehitra ny vanja io lahatsary fanadihadiana io.
Toa tena voamarina ireo ahiahin'i blogdemoi satria efa niteraka fanehoankveitra mivaivay sahady ilay fandaharana…nefa tsy ho alefa akory any Antilles ilay izy, raha tsy ny Zoma 6 Febroary 2009. Izany dia satria nalefa tao Frantsa izy io ny 31 Janoary 2009 ary niampita namakivaky ny Atlantika tamin'ny alàlan'ny aterineto ny vaovao. Avy any Martinika, bondamanjak sy montray kréyol no naneho ny hagagàn'izy ireo sy ny hasorenany taorian'ireo teny nataon'ny taranaka iray avy amin'ireo fianakaviana békés tranainy indrindra sy mpanefoefo ao Martinika, momba ny resaka safiotra sy fanandevozana. :
Any anatin'ireo fianakaviana safiotra, hafa volonkoditra ny ankizy, tsy misy firindràna sy hasambarana. Izaho mahita hoe tsy tsara izany. Izahay (fanamarihana avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra: ny Békés), nokatsahanay ny hitahirizana ny taranaka.
Tsy misy resahan'ireo mpahay tantara afa-tsy ny lafiny ratsy amin'ny fanandevozana, ary zavatra mampalahelo izany.
Taorian'ireo teny nataony, namoaka taratasy iray ilay rangahy mba hanazavàny ny teniny sy ny heviny izay naolan'ilay mpanao gazety. Na izany aza, mbola tsy nampahazo aina ny ankamaroan'ireo mpikambana ao anatin'ny zanaka ampielezan'ny Antilles nahita ilay lahatsary fanadihadiana tany Frantsa ilay izy, toy ny voalazan'ity vehivavy ity:
Izay…mandratra ilay izy…satria isika (ny ambiny tsy békés amin'ny vahoaka) dia heverina ho adala kentrina malemy paika norotsirotsiana tanaty tsy fahalalàna nandritra ny 400 taona !!!
Angamba ny lolompo voalaza etoana no manazava ny antony nametrahan'i bondamanjak ny fanontaniana hoe : “TSY MANITSY ALEFA VE NY IREO ANDRIANA FARANY AO MARTINIKA SY ANTILLES?” Ho an'io fanontaniana io, ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra dia mamaly hoe : eny. Satria ho an'ny maro, dia fotoana izao hamoahana ny marina sasantsasany ho fanta-bahoaka.